Mapatavy ny régime
Mampatavy ny régime
Mila hery mba hahavelona antsika ny vatana. Ary alainy any anatin’ny sakafo hanintsika izany hery izany. Nefa raha mihinana miohatra ny ilain’ny vatana isika, dia ho tahiriziny amin’ny endrika tavy iny hery miohatra iny. Indrindra indrindra any amin’ny kibo ho an’ny vehivavy. Noho izany, raha toa ka mihinan-kanina miohatra ny filan’ny vatana isika dia hatavy.
Ataon’ny vatana inona ary ilay tavy tahiriziny iny ? Inona no antony hanaovan’ny vatana an’izany ?
Efa voavolavola hanao izay afany mba hamelona antsika lalandava ny vatana. Mba hahavelona antsika, mila hery ny vatana. Izany hoe : « mila mihinan-kanina mba hiainana ».
Rehefa mihinan-kanina ambanin’ny fatran’ny hery ilain’ny vatana isika, dia tsy maintsy maka hery any amin’ny tahiriny izy : any amin’ny tavy. Izay no antony mampihena antsika haingana be amin’ny voalohandohan’ny régime.
Noho izany anie, mandaitra ny régime e, sa ahoana ?
Amin’ny voalohany ihany. Matoa ianao tonga teto amin’ito tranon-kala ito, efa niaina ny hakiviana vokatry ny tsy fihetsehan’ny lanja intsony ianao taorian’ny régime nataonao ary ny fahazoana tavy indray taorian’ny taona maromaro.
Inona ary no mitranga ? Fa maninona no tsy mety mihena intsony isika rehefa ela ny ela ?
Voavolavola hamelona antsika ny vatantsika. Matoa isika olombelona mbola velona foana nandritra ny taona maro, dia noho ny fahaizan’ny vatana miaina amin’ny zava-misy.
Amin’ny voalohandohan’ny régime, mbola voatery haka ny hery ilainy any amin’ny tavy ny vatana. Fa mbola mitady hevitra izy mba hahafahany miaina amin’ny fatran’ny hery izay omentsika azy. Ary ho tonga ny andro izay hahafahany miaina tanteraka amin’ny fatran’ny hery izay nomenao azy nanomboka tamin’ny régime nataonao. Izany hoe : hihena ny filan’ny vatana ara-kery mba hitovy amin’ny fatran’ny hery izay omenao azy. Izany hoe raha mifatra 10 ohatra ny hery ilain’ny vatana alohan’ny régime. Ary rehefa manao régime ianao dia manena ny hery omenao azy ho lasa 5 fotsiny. Hahenan’ny vatanao ho 5 fotsiny ihany koa ny filany ara-kery.
Noho izany, ho lasa ampy ny vatana indray izany ny fatran’ny hery izay omenao azy. Izay no tsy mampihena anao intsony. Izay no mahatonga ny lanjanao tsy hihena intsony.
Efa niainanao ve izany ?
Fa maninona ary ny régime no mahangeza e ?
Tsy misy olona maharitra hoe zara raha mihinan-kanina na hoe tsy mihinana karazana sakafo iray na maro (oh : voankazo sy legioma fotsiny fa tsy mahazo mihinana vary, ovy, vokatra avy amin’ny ronono, paty, …) izany mandrapahafatiny. Tsy maintsy ho avy ny andro tsy hahatantesanao izany. Na tiana na tsy tiana, na inona na inona ny fahazotoana.
Ampahatsiahiviko anao fa nihena ny filàna ara-kerin’ny vatana taorian’ny régime. Noho izany, rehefa tsy haritra intsony ny fihafiana, dia lasa mihinana betsaka kokoa noho ny mahazatra isika. Ary matetika aza miohatra alavitra kokoa noho ny talohan’ny régime, tamin’ny mbola tsy nihafy.
Noho izany, raha nihinana hery mifatra 10 isika talohan’ny régime, izany hoe mitovy ny filàn’ny vatana tamin’izany. Aorian’ny régime dia efa nihena ho 5 fotsiny ny filàn’ny vatana. Tsy maharitra ny miafy intsony isika ka lasa misesika hanina izay mitondra hery mifatra 10. Izany hoe mitovy amin’ny fatran’ny hery nilaina talohan’ny régime.
Nefa tsy mijanona eo isika matetika. Mihevitra isika fa : « Rehefa efa tsy haritro intsony ihany ito, efa nanimba ny ezaka nataoko tamin’ny régime ihany aho, maninona raha tsy tohizana e ? ». Dia tohizantsika ihany ny fisesefana hanina. Hany ka miohatra ny 10 ny fatran’ny hery omentsika ny vatana.
Fantatsika anefa fa ny hery miohatra izay omentsika ny vatana dia ho tahiriziny amin’ny endrika tavy. Nefa tsy mila raha tsy ny hery mifatra 5 ihany ny vatana. Nomentsika hery miohatra ny fatran’ny 10 izy. Izay no antony mahatonga ny régime mampatavy, ary mampatavy miohatra kokoa noho ny talohan’ny régime aza.
Fa tsy mijanona eo ny tantara ! Manamelo-tena isika satria tsy nahatana ary dia hamafisintsika kokoa ilay régime. Manasazy tena isika satria « nalemy teo anatrehan’ny fakam-panahy ». Dia mitohy indray ilay boribory vetaveta.
Boribory vetavetan'ny régime
Misy olona sasany izay matavy haingana be nefa zara raha mihinan-kanina raha oharina amin’ny hafa izay tsy mihontsina akory raha mihinana iny fatra iny. Satria izy nanao régimes be loatra. Ka nanena ny filana ara-kerin’ny vatany. Ka noho izany, lasa sakafo kely fotsiny dia efa ampy miohatra ny ilain’ny vatany. Indraindray ireny olona ireny dia tsy tonga saina tsara amin’ny fatra haniny. Satria ilay sakafo nohaniny dia sakafo « mampihena » na « mampahia » ka heveriny fa tsy misy fiantraikany amin’ny lanjany. Hadinoiny ary ny fatra haniny amin’ireny sakafo ireny ary mifantoka bebe kokoa amin’ny fatran’ny sakafo « mampatavy » haniny izy.
Izay ihany koa no mahatonga ny olona sasany mihevitra fa mihamatavy rehefa mihinana karazan-kanina (yaourt, mofo, mofomamy, paty, akondro, zavoka, …) nefa ny sasany mijanona ho kely foana. Raha ny tena marina, nametra ny vatany tsy hihinana ireny sakafo ireny izy. Ka nahatonga azy maniry te hihinana an’ireny (mety lasa obsession mihitsy aza). Izay mitranga matetika rehefa tsy noana izy. Rehefa tsy hariny izany dia mihinana an’ilay sakafo rehefa tsy noana izy ary tsy mahavita ny mijanona intsony. Ary rehefa mihinana nefa tsy noana dia manome hery tsy ilaina amin’ny vatana. Izay ho tahiriziny amin’ny endrika tavy.
Izay no antony mahatonga antsika mihevitra fa efa vahana ny an’ireny olona ireny na jenetika. Tsia ! Vokatry ny régime nataony no mihatra aminy. Mivaly amintsika foana ny ataontsika rehetra.
Fa inona no atao hoe régime ?
Ny régime dia izay fika rehetra, na niniana natao na tsy niniana, izay mahatonga anao hanena ny hery omena ny vatana, nefa tsy miraharaha ny filan’ny vatana. Efa hitantsika fa rehefa kely noho ny filan’ny vatana ny hery hanina dia lasa voatery haka any amin’ny tahiriny izy : any amin’ny tavy. Izay no mahatonga ny régime ho toa mandaitra amin’ny voalohany.
Ireny fika ireny dia manery antsika :
hametra ny fatran’ny hanina izay hanintsika. Oh : tsy misakafo maraina, na hariva, tsy mihinan-kanina mihitsy, tsy mihinana goûter na dia noana aza, …
hifady sakafo izay lazaina fa « ratsy » na « mampatavy » na « tsy mahasalama ». Oh : paty, vary, ovy, akondro, zavoka, vokatra azo avy amin’ny ronono, pizza, hamburger, glasy, sokola, …
hihinana « sakafo » na fifangaroana sakafo voalaza fa « tsara » na « mampahia » na « mampihena » na « mahasalama », na dia tsy tiana aza izany. Oh : smoothies, ranona poarao, dite mampahia, tambavy mampahia, legioma, voankazo …
hifantoka be amin’ny lanjantsika. Izany hoe, hilanja isan’andro isika na isaky ny herinandro.
hampihena ny siramamy na tavy hanina. Oh : mihinana yaourt nature tsy misy siramamy, misotro ronono écrémé, …
hihinana coupe-faim mba hamerana ny fihinanan-kanina
« hanadio ny any anaty » na « hanao détox » amin’ny alalan’ny fanafody, zavatra mampivalana, tambavy, dite na fifangaroan-javatra samihafa.
Normal ve ireo fihetsika ireo aminao ? Sahinao ve ny hanery ny zanakao hanao an’ireo ?
Ary fantaro fa na dia mino mafy dia mafy ianao fa tsy manao régime, nefa manao ny iray na maro amin’ireo fihetsika ireo, dia efa manao régime ianao izay, na dia tsy fantatrao aza izany. Oh : Tsy mihinan-kanina ianao ny hariva satria renoka teo am-piandrasana ny fiverenan’ny jiro tapaka nefa noana. Tsy mihinana goûter ianao nefa noana fa tsy manam-bola hividianana goûterna hoe kamo andeha hividy. Mihinana « sakafo voalanjalanja » ianao ary tsy mihinana « sakafo tsy ara-pahasalamana » mihitsy.
Nefa ankehitriny, misy fika tsy ara-pahasalamana hafa noho ny régime izay omena ny vehivavy te hihena. Ny resahina eto dia ny vokatra izay lazaina fa mampahia na mampihena, toa ny menaka mampahia, savony mampahia, dite na tambavy mampahia, …
Efa hitantsika daholo ny antony mampatavy. Anisan’ireny ny antony ngeza indrindra : ny fihinanan-kanina nefa tsy noana. Mino aho fa tsy mihinan-kanina nefa tsy noana isika mba hihinanan-kanina nefa tsy noana fotsiny. Izany hoe tsy fanahy iniana izany fa voatosika isika. Inona no mampirisika antsika hanao izany ? Efa hitantsika izany : ny niainantsika tamin’ny fahazazantsika.
Rehefa fantantsika izany rehetra izany, mino marina ve ianao fa ireny vokatra ireny dia hamaha ny olanao ? Moa ve ny fisotroana dite na tambavy dia hanakana ny rainao tsy hikasi-tanana anao ? Moa ve ny fandroana amin’ny savony dia hanakana anao tsy hamela sisa intsony ? Moa ve ny menaka fanorana iray dia hamafa ny fahatsiarovanao ny olanao rehetra ?
Ireny « vahaolana » ireny dia manome illusion anao fotsiny fa ho tratranao ny tanjonao. Izany hoe placebos fotsiny ireny.
Hadihadio raha normal ny fomba fisakafohananao
Mandraisa taratasy iray ary valio ireto fanontaniana ireto :
Afaka ny mivoaboaka miaraka amin’ny namanao ve ianao nefa tsy matahotra ny hiditra anaty fivarotana pizza na mofomamy ?
Matahotra ny hatavy ve ianao rehefa mandeha mariazy ?
Mila mitandrina amin’ny haninao foana ve ianao ?
Matahotra ny hihinana karazan-tsakafo sasany ve ianao ? Oh : akondro, yaourt, paty, vary, mofo, ovy, pizza, mofomamy, …
Araka ny hevitrao, normal ve ny fomba fiainanao ?
Mahafaly anao ve ny fomba fiainanao ?
Mandraisa taratasy iray. Zarao roa iny taratasy iny. Amin’ny ilany iray, tanisao ny fomba fampihenana tena rehetra izay fantatrao. Oh : régime, tsy misakafo maraina na hariva, tsy mihinan-kanina, dite mampahia, hotra, fanatanjahantena, … Ao amin’ny ilany faharoa, valio ireto fanontaniana ireto isaky ny fika tsirairay avy :
Manery anao hametra ny haninao ve io fika io (na ny fatra haninao na ny karazan-kanina azonao sy tsy azonao hanina) ?
Mino marina ve ianao fa ho normal ny fomba fiainanao miraka amin’io fika io ?